သက်ဝေ: အိပ်မက်ထဲက ဘလော့ဂ်လေး
Posted by သက်ဝေ at 9:37 AM
အောင်သာငယ် June 10, 2008 at 9:57 AM
Hey---- U should not make us scared. I thought it is really.
nu-san June 10, 2008 at 11:36 AM
သက်ဝေရေ.. ရေးတတ်လိုက်တာ။ အိပ်မက်က လည်း ကြံကြံဖန်ဖန်နော်..:D အင်း..တို့ကတော့ ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဆိုရင် ဘလော့ခ်ဖြစ်ပါ့မလားတောင် မသိတော့ပါဘူး သက်ဝေရယ်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ခ်လည်တာတော့ ဆက်လည်နေဦးမှာပဲ...သူငယ်ချင်းရေ.. :)
တန်ခူး June 11, 2008 at 9:07 AM
သက်ဝေရေ…အိပ်မက်လေးကထိတယ်…သက်ဝေအိပ်မက်တွေက မှန်တတ်လားဟင်…ဒါဆိုရင်တော့ တို့ တွေတော့ နှစ်ခါထိမှာပဲ…ခက်တာက
တို့ အမျိုးသားကblogရေးဖို့မပြောနဲ့ဖတ်စေချင်တဲ့postတောင် တောင်းတောင်းပန်ပန် ဖတ်ခိုင်းရတယ်…အဲဒီတော့ blog dependent လုပ်လို့ လဲမရ…မဖြစ်ဘူး..ခုထဲက blog ချွေတာရေးတို့ ၊ blog fasting တို့ ကျင့်ထားမှ…မblogပဲမှ မနေနိုင်တာ…ွ
Layma June 11, 2008 at 8:00 PM
ဂယ်ကြီးလားလို့ .. လန့်သွားတာပဲ ...။မမသက်နော် ..။ လေးမက တစ်နှစ်ပြည့် လုပ်ထားတာ မကြာသေးဘူး..။ နောက်နဲ့ နော်...။
ရွှန်းမီ June 11, 2008 at 9:52 PM
.. ပိုက်ဆံ ပေးရမယ်ဆို နံရံတွေမှာပဲ လိုက်ရေးတော့မယ်..
myatnoe June 12, 2008 at 8:16 PM
အမကလဲ နော်.. ရေးတတ်လိုက်တာ.
တကယ်လားလို့အဲ့လိုသာ ကုန်မယ်ဆိုရင် ဘလော့မရေးတော့ဘူး တော်တယ် အိပ်မက်တစ်ခုကို ပို့ စ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်လို့။
သက်ဝေ June 27, 2008 at 1:11 PM
သမိန်ပေါသွပ်ကာတွန်းထဲကလို... ခံရပေါင်းများတော့ ရင်ထဲ ကလိကလိ နဲ့ရေးချင်တာရေးထားတာပါ။
ဟီး.. မကြောက်ပါနဲ့ ဗျ.. နောက်တာပါ။
ဘာတွေကို ရောရောထွေးထွေး ရေးထားတယ်ဆိုတာ တန်ခူးတို့ လို စကာင်္ပူ ကသူတွေကတော့ ပိုသိပါလိမ့်မယ်...
သက်ဝေအတွက်တော့ ဘလော့ဂ်ရတာလဲ တော်တော်ခက်ပါတယ်၊ ရေးစရာ အကြောင်းအရာရှာရ... ရေးစရာ အချိန်ရှာရ... လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေကို ပြန်မနှုတ်ဆက်နိုင်တော့ မျက်နှာပူ အားနာရ နဲ့ ...
နောက်တာပါ... ကြောက်ပါနဲ့ လေ... ဟိ